भर्खरै अर्घाखाँचीबाट आयो बस दुर्घटनाको दुःखद खबर, १४ हताहत! – All top Here
Home/समाचार/भर्खरै अर्घाखाँचीबाट आयो बस दुर्घटनाको दुःखद खबर, १४ हताहत!
अर्घाखाँची -भाइटिकाको अघिल्लो दिन सोमबार साँझ नै अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना भएको छ । शितगंगा नगरपालिकाको जुकेनामा सोमबार साँझ भएको बस दुर्घटनामा १४ जना घाइते भएका छन । ठाडाबाट जलुकेका लागि छुटेको लु २ ख ६६१ नम्बरको बस जुकेनाको रातामाटामा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटना ब्रेक फेलको कारणले भएको जनाइएको छ। घाइते सबैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठाडामा उपचार भैरहेको जनाइएको छ । फाइल तस्बिर
१३ बर्षकी कमला यतिबेला निकै व्यस्त छिन् । एक्कासी भाईल भएकी कमलालाई बिभिन्न मेला, महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रममा लाईभ दोहोरी गाउन भ्याई नभ्याई छ । देशका चर्चित दोहोरी गायकहरुलाई कमलाले दोहोरीका गतिला टुक्काहरुले कायल पारिसकेकी छिन् ।यसैबिच हामीले प्रस्तुत गरिरहेको यो दृश्य हो, नारायणगढ, चितवनको एक कार्यक्रमको । कमला गाउंदै थिईन्,एक्कासी कमलालाई गाह्रो भयो । उनी टाउको समातेर रुन थालिन् ।
उनलाई स्टेज भन्दा टाढा लगियो र पानी खुवाईयो । त्यति हुंदा पनि उनीसंग फोटो खिच्न उनलाई माया गर्ने दर्शकहरुले छोडेका थिएनन् । एकैछिन थकाई मारेपछि कमला फेरी मैदानमा उत्रिईन् र यसरी दोहोरी भिडिन् ।
यतिबेलाकी चर्चित बाल लोक दोहोरी गायिका कमला घिमिरे एक मनोरन्जनात्मक कार्यक्रममा रमाउंदै चर्चित लोक दोहोरी गायकहरुसंग लाईभ दोहोरी गाउंदै थिईन् । एक्कासी कमलालाई गाह्रो भयो । उनी टाउको समातेर रुन थालिन् । उनलाई स्टेज भन्दा टाढा लगियो र पानी खुवाईयो । आदरणिय दर्शकबृन्दहरु नमस्कार, तपाईहरुले निकै रुचाउनु भएको कमला नानीको भिडियो लिएर आएका छौं । सबैले लाईक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला ।
पुरा भिडियो पनि हेर्नुहोला
दाजु भाईको एउटै चि’तामा अन्त्ये’ष्टी ,सिङ्गो गाउँ नै स्तब्ध
सरकारको अर्को राम्रो कदम :